Home » Creative Writing » သမီးငယ်လေး၏ စကား
သမီးပြောလိုက်တဲ့စကားလေးက ရင်ထဲကိုနင့်သွားတာပဲအမရယ်။ အငယ်ကလဲအငယ်အလျောက် သူများအကျရလို့ခံစားရ အကြီးတွေကလဲအကြီးအလျောက် အငယ်ကိုအလျော့ပေးရလို့မကျေနပ်တဲ့ခံစားချက်တွေကြားကြားနေရတယ်မမှီရယ်။ မိဘဆိုတာသားသမီးတိုင်းကိုတန်းတူချစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ သူတို့လေးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ကလေးတွေကို ညီမျှအောင်ဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာ အတော်ခက်မယ်နော်။ တယောက်ထဲသားတောက် သူ့ကိုဆူလိုက်ရင် နှစ်ယောက်သာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သူအဆူခံရသက်သာမှာပဲဆိုတဲ့စကားပြောလေ့ရှိတယ်။ သားသမီးရေးဟာ ကိုက်တွယ်ရအခက်ဆုံးပြသနာနဲ့တူတာပါပဲ မမှီရေ
မသဲရေ ဒါက သမီး အကြောင်း။ လာမယ် နောက်တခါ သားအကြောင်း။ နန်းကျဘုရင်လို့ ခေါင်းစဉ် တပ်ထားတယ်။ တယောက်တည်းသမား သူငယ်ချင်းက ပြောဖူးတယ် အခု မသဲရဲ့ သားလေး ပြောသလိုပဲလေ။ အလတ်တွေ အကြောင်းလည်းရှိသေးတယ်နော်။ ဆရာမ မစန္ဒာရေးထားတာ ကွက်လပ်ကလေးဖြည့်ပေးပါတဲ့။ ဖတ်ပြီးတော့ ငိုခဲ့ရတာ မျက်လုံးတွေ အစ်တဲ့ အထိပဲ။
မှီရေ၊ဒီပြဿ နာတွေကတော့ ရှိနေမှာပါပဲ။ အမလည်း အိမ်မှာ အငယ်ဆုံးဆိုတော့ အကျတွေပဲ ၀တ်ရတာ။ဒါပေမယ့် အဲဒါကို စိတ်ထဲ မကျေမနပ်မဖြစ်မိဘူး။တမျိုးလုံးက သူနဲ့ငယ်သွားရင် နောက်တယောက်ကိုပေးဝတ်တာ အကျင့်ဖြစ်နေတော့ အကျီင်္ကောင်းကောင်းလေးတွေဆို ခရီးသွားတဲ့ အကျီင်္ လူတိုင်းဝတ်ဖူးတယ်ဖြစ်နေပြီ။
ကျေးဇူးပါ အမရေ ညီမ စာအုပ်ဆိုင်မှာ ရှာပြီး ၀ယ်လိုက်ပါ့မယ်။
အစ်မ အထင်တော့ မှီ ရေ။
ဟုတ်တယ် အမရေ အဲ့သည်နေ့က သမီး ကြီးကြီးနွဲ့ အဆူခံထိတယ်။ သူက သမီးကို သိပ်ချစ်ပြီး သိပ်ပြီးလည်း စ တယ်။ သမီးက သူနဲ့ အနေများတယ်လေ။ မွေး ကတည်းက သူပဲ ထိန်းတာဆိုတော့ နှစ်ယောက်သား အချစ်ပိုကြတယ်။ အခုဆို သတိပေးနေရတယ် သမီး မှတ်သွားမှာတွေကို သိပ် မ စ ဖို့လေ။
ကျမလည်း အကျ​တော်​​တော်​များများ ၀မ်းကွဲ​တွေဆီက၀တ်​ခဲ့ဖူးတယ်​
ပုခ်ျရေ အိမ်မှာက မိသားစု များလို့ ထင်ရဲ့ သမီး တတ်နေတာက တခါတခါ မထင်မှတ်တာတွေရောပဲ။ အခုဆို သူ့ရှေ့မှာ အပြောအဆို အနေအထိုင်ပါ လူကြီးတွေမှာ ဆင်ခြင်နေရတယ်။ သူက အကုန် အတုခိုးနေတာ။ လူက သက်တန်းပဲ တိုလာလို့ ထင်ပါရဲ့ ကလေးတွေဟာ အတတ်မြန်နေကြတယ်။
ဒါက လူကြီးတွေရဲ့ သူများဟာ အသုံးအနှုန်းကို ကလေးရှေ့မှ မပြောသင့်ဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။ မနောလည်း မောင်နှမထဲမှာ အကြီးဆုံးဆိုပေမယ့် ၀မ်းကွဲအစ်မနဲ့ ငယ်ထဲက တူတူနေလာတော့ သူ့အကျတွေပဲ ရတာများပါတယ်။ ကိုယ်ဟာ ၁ နေရာ မရှိပဲ အမြဲ သူပြီးဆိုတဲ့အတွေးက ခုအသက်ကြီးတဲ့တိုင် စွဲထင်နေတုန်းပါပဲ။ ကလေးတွေရဲ့ရှေ့ ဘယ်သူ့အကျပေမယ့် မပြောရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်ရှင်။
မနောရေ ဟုတ်တယ် အခုခေတ် ကလေးတွေဟာ အတတ်မြန်လို့ ကလေးပဲ ဆိုပြီး သတိလက်လွတ် မနေသင့်တာ အမှန်ပဲ။
သူတို့ကို.. နေရာပေးသင့်..။ နေရာရှိပြီးသူတွေကလည်း.. စာတွေရေးသင့်..။
အရင် ဂ ငယ်တွေဆီမှာ နေတုန်းက တီဗွီ အစီအစဉ် တခု အမြဲလာတယ်။ သဂျီးတို့ဆီမှာ ကလေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပရိုတွေ အကြောင်း။ ကျွန်မ သိပ် သဘောကျတာပဲ။ မိဘနဲ့ ခွဲ သိပ်တာတွေ၊ မိဘကို ဆိုးနေတာတွေကို ထိန်းတာများ တော်တော် အဆင့်မြင့်တာပဲ။ ကျွန်မတို့ ဒီမှာတော့ ဒါမျိုး ဝေးဦးမယ် ထင်ပါရဲ့။
ကလေးကို မခံနိုင်အောင်စနောက်ပြီး ကလေးပြန်အော်တာ ငိုတာကို အရသာတွေ့တတ်တဲ့ သူမျိုးက ကလေးကိုအမှန်တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ရောဂါ အနုစားတမျိုးပါ။
ချစ်တာတော့ ချစ်ပါတယ်။ သူပဲ သမီး ဒဏ်ကို ခံတာပါ။
အမှန်တော့လဲ မိဘက သားသမီးတွေကို အတူတူပဲချစ်တယ်ဆိုတာ ညာတာဗျ…
ဒါပေမဲ့လဲ ဘာတတ်နိုင်မလဲ.. ဒီလိုပဲပေါ့
မဟုတ်ရပါဘူးကွယ်။ အမ အပျိုတုန်းက အဲ့လိုမျိုး အမေ့ကို စကားနာ ထိုးဖူးတယ်။ အခု အမေက ပြန်ပြောတယ် ညည်း ကလေး နှစ်ယောက်ရပြီ သိပြီလားတဲ့ မိဘဆိုတာ ဘယ့်သူ့ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မပိုဘူးဆိုတာကိုတဲ့လေ။ အငယ်လေးကိုတော့ အမေကို အားကိုးနေရသေးတဲ့ ရင်ခွင်ပိုက်မို့ ပိုယုယမိတာမှန်ပေမဲ့ သားကြီးက ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ကိုင် တတ်နေတာမို့ မလုပ်ပေးတာ မချစ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သားကြီးလည်း သာကြီးမို့ သမီးလေးလည်း သမီးလေးမို့ တမျိုးဆီ ချစ်ရတာ အမှန်ပါပဲကွယ်။ ဆိုးတဲ့ သားသမီးဆို ဘေးဖြစ်မှာ စိုးလို့ ပိုဂရုစိုက်ရတယ်။ လိမ္မာတော့ ဂုဏ်ယူရပြန်ေ၇ာ။ မိဘ မေတ္တာဟာ သိမ်မွေ့ပါတယ်။
ငင်.. ဒမာရေးတာပါ… ဘယ်လိုလုပ် အပေါ်ရောက်သွားလဲ…
နာ့ဘွ ငိုတာတောင် လွှဲနေသေးဒယ်
ဦးမိုက်ရေ ကျွန်မတို့လည်း မောင်နှမ များတာပဲ။ အကောင်းနဲ့ အဆိုးဒွန်တွဲနေတာမှာ တခုကောင်းတာက မောင်နှမများတော့ အားမငယ်ရဘူးပေါ့။
နင့်ကို နင့်အမေက အမှိုက်ပုံထဲက ကောက်ရတာလို့ စနောက်နေပြီး ခလေးတွေ စိတ်ဆိုးတာ ကျေနပ်နေတဲ့သူတွေများတွေ့ရင် … ပြောမကောင်းလို့သာ ငြိမ်နေရတယ်…။ စိတ်ထဲမှာတော့ အဲ့ဒီလူကို လည်ပင်းညှစ်ချင်နေပြီ….
အဲံလို စတာတွေက မြန်မာတွေမှာ အကျင့်ကို ဖြစ်နေတာ။ ကိုယ်က ပြောလိုက်ရင် အဖြစ်သည်းတယ်ဖြစ်ရော။
ဟုတ်တယ် မမှီရေ အဲတာအငယ်တွေရဲ့ ခံစားချက်ပဲ . နွယ်ပင့်မှာလည်း အဲလိုခံစားချက်မျိုးရှိတယ် အဲတာကလေ ငယ်ငယ်က အကျီတွေကို ဆိုဒ်အကြီးတွေ ဝတ်ရတာလေ စီမံကိန်းအင်္ကျံပေါ့ ကိုယ်နဲ့ အတိဆို ခနလေးနဲ့ သေးသွားတက်တော့ အိမ်က အမြဲဆိုဒ်ကြီးတာတွေပဲ ဝယ်ပေးတယ် အငယ်ဖြစ်တော့ အမြဲတမ်း အစ်ကို အစ်မတွေအကျကလည်းဝတ်ရတော့ အမြဲကြီးတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပီဆို အင်္ကျံက ဟောင်းနွမ်းနေပီလေ နောက်ပီးသူများအကျ ဝတ်ရတာကိုလည်း မကျေနပ်ဖူးလေ့အဲတာကြောင့်နွယ်ပင်က အခု တူလေးတွေ တူမလေးတွေကို အင်္ကျံဝယ်ပေးတယ်ဆို ကွတ်တိလေးတွေပဲ ဝယ်ပေးတယ် ကိုယ်တုန်းကလို ဆိုဒ်အကြီးကြီးတွေ နဲ့ မလှမပ ဖြစ်နေမှာဆိုးလို့လေ …
အမမှာလည်း အဲ့သည့် အကျင့်ရှိတယ်။ ဆိုဒ်ကြီးတာဝယ်မှ နည်းနည်း ကြာကြာဝတ်ရတယ်လေ။ သားဆို ၆နှစ်ဆိုပေမဲ့ ဘောင်းဘီရှည်ဝယ်ရင် ၁၀နှစ်အရွယ်ဝယ်တယ် ပြီးရင် ခြေဖျားကို နှစ်ခေါက်လောက် ခေါက်ပေးထားတာ။
​ကျော်​သမ်​မတဖြစ်​ရင်​ ဒီပြသနာကို အ​လေးထား​ဖြေရှင်း​ပေးမှာမို့ စိတ်​​အေး​အေးထားပီး ​ကျော့်​ကို မဲထည့်​ကြပါခီညာ
သမ်မဒ မဖြစ်ခင်ကဒေါင် ဂလောက် ဘလက်မတ်စိ(Black Message) ဒွေရနေတာ သမဒဖြစ်လို့ကတော့ မတွေးဝံ့ဆယာ
အားပေးချီးမွမ်းတာ များသွားလွန်း ရင်လဲ အောက်ခြေလွတ် တတ်သတဲ့။
ဗုဒ္ဓ ရဲ့ “အလယ်လမ်း ကျင့်စဉ်” ကတော့ မမှားတဲ့ လမ်း ဆိုတာ မှန်ပြီးရင်း မှန်ရင်းပါဘဲ။
ကာတွန်း Link လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ဖိုးသကြား။ :))
hmee says: လူက သက်တန်းပဲ တိုလာလို့ ထင်ပါရဲ့ ကလေးတွေဟာ အတတ်မြန်နေကြတယ်။
မနုဿတ္တဘာဝေါ ဒုလ္လဘော၊ သမားတွေရဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာ.. လူဦးရေ၉ဘီလီယန်ရောက်လာရင်.. စကားရှေ့နောက်ညီသွားအောင်.. ဆူဆိုက်လုပ်… သတ်သေကြရမလိုလို..။
Most Babies Born Today May Live Past 100 – ABC News
အစ်ကိုတွေကြားကြီးပြီး…အသက်လည်းကွာတော့ အဲ့ဒီဖီလင်မခံစားခဲ့ရဘူး… :)) အရွယ်ရောက်လာပြန်တော့လည်း ကိုယ့်အကျ
ပို့စ်နဲ့ကွန်မင့်တွေဖတ်ပြီး… အိမ်လာလည်တတ်တဲ့ အကြောမာတဲ့ ကလေးမကို မခံချင်အောင်ပြောပြီး ရန်ဖြစ်တာဆင်ချင်မှ.. :p:
မိဘတိုင်းကတော့ သားသမီးတွေကို အတူတူချစ်ကြတာပါပဲ